FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BORADOR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Borador
Alika mifangaro mifangaro ny sisin-tany Collie / Labrador Retriever
'Maci dia Borador (Border Collie / Chocolate Lab mifangaro) aseho eto amin'ny 9 volana. Tena marani-tsaina izy, mavitrika ary tia ny eny ivelany sy misolelaka ambany lamba firakotra. Azony atao: mipetraka, mandry, milalao maty, mihorona, manidy varavarana, mamafa ny tongony, mitondra izay angatahinao, ary mihodinkodina boribory, baiko. Tiany koa ny mitsako, fa ny kilalao ihany no fantany fa tsy ny kiraro, sns. '
Ny alika Borador dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Border Collie ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpikambana amin'ny alika Borador (Alika Border Collie / Lab mifangaro) amin'ny 5 taona
'Dozer the Border Collie / Lab mix (Borador) dia manana ny herin'ny Border Collie sy ny fahaiza-mihaza vorona ao amin'ny Lab. Alika tsara izy. '
'Rex dia alika kely Labrador / Border Collie 3 volana. Ny reniny dia i Border Collie, ny rainy Labrador mainty. Toa manana ny toetran'ny Labrador izy fa ny herin'ny Border Collie rehetra !! Tsy ho vitanao ny mandreraka azy! Tiany ny biby, indrindra ny olona !! Tsy dia azony toy ny Labrador ny lalao. Tsy maintsy miandry fotsiny isika sao ho lasa toy ny Collie na Lab !! '
Mickey Roonie Rourke the Borador (Border Collie / Labrador Retriever mix) amin'ny 1 ½ taona— 'Nanavotra azy tamin'ny kilao isan'andro izahay talohan'ny tokony hamonoana azy. Mpangaro Lab sy Border Collie izy. Tena tianay izy ary tena nanampy betsaka anay mianakavy izy. '
Charlie the Borador (Border Collie / Labrador Retriever mix karazany) alika kely
Ento ny karazana mavo Lab sy Border Collie mix (Borador) amin'ny faha-6 volana
Ento ny fifangaroan'ny Lab sy Border Collie mavo (Borador) amin'ny 1 taona— 'Izy ity no misolo toerana ny ankohonany eo ho eo. 1 taona. Mba hanomezana anao hevitra ny habeny, dia eo anelanelan'ny 60 sy 65 pounds izy amin'ny 1 taona 8 volana. '
'Sweet Pea, ny sisiko vavy Border Collie / mavo Lab mifangaro amin'ny 4 taona dia alika mahafinaritra tokoa ary tsara miaraka amin'ny fianakaviana sy ny olon-tsotra, saingy miaro be amin'ny olon-tsy fantatra na alika hafahafa izy. Tsy dia lehibe amin'ny lomano anaty rano izy, fa manana tranokala webbed. Hendry koa izy ary tia manao fanatanjahan-tena. Mipetraka amin'ny fianakaviana 3 (reny, dada, zanaka vavy) ary saka enina izy ary mifankahazo tsara amin'ny saka. Noraisinay izy tamin'ny faha-3 volana tamin'ny SPCA teo an-toerana ary biby fiompy mahafinaritra izy! Manodidina ny 40 pounds izy ary eo amin'ny 22 1/2 santimetatra ny halavany hatramin'ny gorodona ka hatramin'ny soroka ary 30 santimetatra ny halavany avy amin'ny orony ka hatramin'ny vodiny. Mpihinana lehibe izy ary tsy dia mifidy. '
Mankanesa any amin'ny Border Collie / Lab mifangaro alika kely amin'ny 4 volana
'Ity i Kelsea haingam-pandeha manga-Merle Border Collie miampita an'i Labrador. Izy no alikakely tsara indrindra eran'izao tontolo izao, tia milalao foana, mahira-tsaina, mora zatra (afaka manome hi-5) ary lasa mpinamana be indrindra tamin'ny mpianakavy rehetra. Mampalahelo fa narary izy ary tao anatin'ny 2 herinandro dia tsy maintsy natsipy izy tamin'ny taona 18 volana. Tena mahery setra izy homamiadana ao amin'ny havokavony . Malahelo mafy azy izy. Izy dia fifangaroana lehibe amin'ny karazany sy ny angovo ary ny a Border Collie ary ny fitiavana sy fiarahana amin'ny a Labrador . Aza avela hampiala anao amin'ny fifangaroan'ny karazany ity tantaran'ny homamiadana ity, tsy nanam-bintana fotsiny izahay, fa hitady alika kely hafa miaraka amin'ity fitambarana ity ihany isika amin'ny ho avy. '
amidy buckley tendrombohitra amidy
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Borador
Borador Sary 1
alika feista an-tendrombohitra amidy